Wadada Boorama ilaa Jabuuti oo Itoobiya rabto in la dhiso - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wadada Boorama ilaa Jabuuti oo Itoobiya rabto in la dhiso
Waxay ahayd laba bilood ka hor markii masuuliyiin ka socda bangiga horumarinta Afrika ay tageen Boorama kadibna loo dhaqaajiyay dhinaca wadada isku xidha ilaa Jabuuti oo ka mida wadooyinka ugu xn gobolada Woqooyi. Waxase hadda masuul ka tirsan Somaliland xaqiijay in wadada ay dalbadeen in la dhiso Itoobiya iyo dawlada dhexe.
Isagoo ku faanaya in Somaliland hormood ka tahay ayuu dhinaca kale qarxiyay rabitaanka Itoobiya ee wadadaas shegayna in sadex dal wada saxiixeen. Itoobiya ayaa rabta wado la isku halayn karo oo wax weyn ka bedela dhaqaalaha gobolka.
Dawladiji dhexe ee dalka ayaa ku fashilmey inay wax ka qabtaan wado muhiim u ah horumarka dalka. ”Dawlada dhexe ayaa qalinka ku duugtey ayuu yiri Cabdullaahi Abokor Cusman oo maamulka Somaliland u qaabilsan gaadiidka.